Madaxweynaha Bangiga Adduunka hanaanka maaliyadeed ee dalka isaga oo lakulmay Madaxweyne Farmaajo “Sawirro” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Dowladd Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kullan laqaatay Madaxweynaha Bangiga Adduunka David Malpass isaga oo Madaxweynaha warbixin ka siiyey sida uu Bangiga Adduunka ula dhacsan yahay Hanaanka Maaliyadeed ee dalka.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa yiri
“Waxaa sharaf ii ah anigoo ka mid ah Wafdiga Madaxweynaha Soomaaliya ee UNGA in aan kulamo gaar-gaar ah la qaadanay Madaxda Bangiga Aduunka iyo IMF.”
Waxaa sii hadlay Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda “Madaxweynaha Bangiga Aduunka David Malpass ayaa si gaar ah Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo u siiyay warbixin ku saabsan qaabka uu Bangigu ula dhacsanyahay hanaanka Maaliyadeed ee Dalkeena”.
Wasiirka Maaliyadda Dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa u mahadceliyey Agaasimaha Guud ee IMF-ta taas oo hadda xilka kasii dageysa.
“Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Agaasimaha guud ee IMF ee hada xilka ka sii dagaya David Lipton oo aan inbadan soo wada shaqeynay iyo Kristalina Georgiev oo iyaduna ah Agaasimaha cusub ee dhawaan shaqada la wareegi doonta, sidoo kalena waxay si wanaagsan noola shaqeysay intii ay joogtay Bangiga Aduunka”.
Bulshadda Xeraale iyo Huurshe oo Heshiis rasmi gaaray "Sawirro"